တရုတ်နိုင်ငံတွင် NT စီးရီး Tool ကိုရှင်, NT40 Chuck ရှင်, NT40 Collets Chuck ရှင်, Tool ကိုရှင် Tool ကိုရှင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်း
Home > ထုတ်ကုန်များ > tool ကိုရှင်NT Tool ကိုရှင် DIN2080
NT Tool ကိုရှင် DIN2080 ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, NT စီးရီး Tool ကိုရှင်, NT40 Chuck ရှင် ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, NT40 Collets Chuck ရှင် R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
မြင့်မားသော Precision NT30 မျက်နှာစက် Arbore
Tool ကိုကိုင်ဆောင်သူသော့ခတ် device ကို NT FMB tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ
မြင့်မားသော Precision NT collet Chuck FMB tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ
High Quality NT30-FMB M12 မျက်နှာစက် Arbore
High Quality NT40-ER40 M 16 Collets ရှင်
High Quality NT30-ER40 M12 Collets ရှင်
မြင့်မားသော Precision NT30-FMB22-M12 မျက်နှာစက် Arbore
မြင့်မားသော Precision NT ဘေးထွက် Lock ကိုအဆုံးစက် Arbore
မြင့်မားသော Precision NT30-FMB22-45 မျက်နှာစက် Arbore
မြင့်မားသော Precision NT30-OZ25 M12 Collet Chuck
Keyway မရှိရင်အဲဒီ ISO ER အမြင့်မြန်နှုန်း Collet Chuck
DIN2080 NT50-ER32 NT tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ
CNC သည်မြင့်မားသောအမြန်နှုန်း NT30-oz Collet Chuck
CNC သည် NT30-FMB22 မျက်နှာစက် Arbore
ISO40 Collet Chuck ကိုင်ဆောင်သူ
DIN2080 NT40 Collets Chuck ကိုင်ဆောင်သူ
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 12.5 - 13 / Piece/Pieces
မြင့်မားသော Precision NT30 မျက်နှာစက် Arbore ထိုကဲ့သို့သောမျက်နှာကိုကြိတ်ရှုးအဖြစ် radial drive ကို groove အတူရှုးများ၏ Clamp များတွင်အသုံးပြု high Precision NT30-FMB22-M12 မျက်နှာစက် Arbore, ဒေါင်လိုက် disc ကိုရှုး, အ set ကို type ကိုအဆုံးကြိတ်, မြန်နှုန်းမြင့်နှင့်မြင့်မားသောတိစက် .Mechanical ဗိုင်းလိပ်တံနဲ့ tools...
Tool ကိုကိုင်ဆောင်သူသော့ခတ် device ကို NT FMB tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ ထိုကဲ့သို့သောမျက်နှာကိုကြိတ်ရှုးအဖြစ် radial drive ကို groove အတူရှုးများ၏ Clamp များတွင်အသုံးပြု high Precision NT30-FMB22-M12 မျက်နှာစက် Arbore, ဒေါင်လိုက် disc ကိုရှုး, အ set ကို type ကိုအဆုံးကြိတ်, မြန်နှုန်းမြင့်နှင့်မြင့်မားသောတိစက် .Mechanical...
မြင့်မားသော Precision NT collet Chuck FMB tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ ထိုကဲ့သို့သောမျက်နှာကိုကြိတ်ရှုးအဖြစ် radial drive ကို groove အတူရှုးများ၏ Clamp များတွင်အသုံးပြု high Precision NT30-FMB22-M12 မျက်နှာစက် Arbore, ဒေါင်လိုက် disc ကိုရှုး, အ set ကို type ကိုအဆုံးကြိတ်, မြန်နှုန်းမြင့်နှင့်မြင့်မားသောတိစက် .Mechanical...
မြင့်မားသော Precision NT30-FMB22-M12 မျက်နှာစက် Arbore ထိုကဲ့သို့သောမျက်နှာကိုကြိတ်ရှုးအဖြစ် radial drive ကို groove အတူရှုးများ၏ Clamp များတွင်အသုံးပြု high Precision NT30-FMB22-M12 မျက်နှာစက် Arbore, ဒေါင်လိုက် disc ကိုရှုး, အ set ကို type ကိုအဆုံးကြိတ်, မြန်နှုန်းမြင့်နှင့်မြင့်မားသောတိစက် .Mechanical...
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 13 / Piece/Pieces
Supply နိုင်ခြင်း: 1000/month
High Quality NT40-ER40 M 16 Collets ရှင် High Quality NT40-ER40 M 16 Collets ရှင် အမျိုးမျိုးအရွယ်အစားအမျိုးမျိုး၏ tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ clamping DIN6499 collet, မြန်နှုန်းမြင့်နှင့်မြင့်မားသောတိစက် .Mechanical ဗိုင်းလိပ်တံနဲ့ဖြတ်တောက်ရေးကိရိယာများနှင့်အခြား accessories.High Precision NT Shanks Tool ကိုရှေးခယျြသည်...
High Quality NT30-ER40 M12 Collets ရှင် High Quality NT30-ER40 M12 Collets ရှင် အမျိုးမျိုးအရွယ်အစားအမျိုးမျိုး၏ tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ clamping DIN6499 collet, မြန်နှုန်းမြင့်နှင့်မြင့်မားသောတိစက် .Mechanical ဗိုင်းလိပ်တံနဲ့ဖြတ်တောက်ရေးကိရိယာများနှင့်အခြား accessories.High Precision NT Shanks Tool ကိုရှေးခယျြသည်...
မြင့်မားသော Precision NT ဘေးထွက် Lock ကိုအဆုံးစက် Arbore 1, M က aterial: 20CrMnTi 2, ထုတ်လုပ်မှုစံ: DIN2080 3, ဇာစ်မြစ်၏နေရာ: တရုတ်လုပ် 4.NT40 = Taper Shanks taper 7:24; ER = အဆိုပါ er collet သတ်မှတ်ချက်များ; 100L အလုပ်၏အရှည် = ။ အဓိကအားဖြင့် collets မျိုး, tool ကိုကိုင်ဆောင်သူမျိုး, BT tool...
မြင့်မားသော Precision NT30-FMB22-45 မျက်နှာစက် Arbore ထိုကဲ့သို့သောမျက်နှာကိုကြိတ်ရှုးအဖြစ် radial drive ကို groove အတူရှုးများ၏ Clamp များတွင်အသုံးပြု high Precision NT30-FMB22-45 မျက်နှာစက် Arbore, ဒေါင်လိုက် disc ကိုရှုး, အ set ကို type ကိုအဆုံးကြိတ်, မြန်နှုန်းမြင့်နှင့်မြင့်မားသောတိစက် .Mechanical ဗိုင်းလိပ်တံနဲ့...
မြင့်မားသော Precision NT30-OZ25 M12 Collet Chuck စက်မှုဗိုင်းလိပ်တံနဲ့ဖြတ်တောက်ခြင်း tool ကိုများနှင့်အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်း tool ကိုချိတ်ဆက်မှုအတွက် NT Tool ကိုရှင်။ ရိုးရှင်းသော, လူကြိုက်များဗိုင်းလိပ်တံ Shanks ကွန်နက်ရှင်စံ, အဓိကအားဖြင့် NT30 NT40 NT50 ... etc ဖြစ်ပါတယ် .....
ISO ကို ER အမြင့်မြန်နှုန်း Collet Chuck Key ကိုလမ်းမရှိရင် Keyway မရှိရင်အဲဒီ ISO ER အမြင့်မြန်နှုန်း Collet Chuck, DIN6499 collet tool ကိုအမျိုးမျိုးသောအရွယ်အစား၏ကိုင်ဆောင်သူ, မြန်နှုန်းမြင့်နှင့်မြင့်မားသောတိစက် .Mechanical ဗိုင်းလိပ်တံ clamping နှင့် tools များနှင့်အခြား accessories.High Precision NT Shanks Tool...
DIN2080 NT50-ER32 NT tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် မော်ဒယ်မ .: ER8, ER11, ER16, ER20, ER25, ER32, ER40, ER50 ပို့ကုန်စျေးကွက်များ: ကမ္တာ့ အပိုဆောင်းအင်ဖို ထုပ်ပိုး: နျ Standard package နျ Standard: DIN6499B ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ ER8, ER11, ER16, ER20, ER25, ER32, ER40, ER50 Collets 1)...
CNC သည်မြင့်မားသောအမြန်နှုန်း NT30-oz Collet Chuck ကုန်ပစ္စည်းများအားသာချက်များ: 1. NT30-oz Collet Chuck, ခွံမာသီး၏ထူးခြားသောဒီဇိုင်း: မြန်နှုန်းမြင့်ဖြတ်တောက်ခြင်း, ဆွဲယူပြီးဖြတ်တောက်ခြင်းဆူညံသံလျော့ချခြင်းနှင့်အလုပ်ထိရောက်မှုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်, Balance G2.5 30000rpm သည်။ G6.3 12000rpm ။ 2. NT30-oz Collet Chuck,...
CNC သည် NT30-FMB22 မျက်နှာစက် Arbore ထိုကဲ့သို့သောမျက်နှာကိုကြိတ်ရှုးအဖြစ် radial drive ကို groove အတူရှုးများ၏ Clamp များတွင်အသုံးပြု CNC သည် NT30-FMB22 မျက်နှာစက် Arbore, ဒေါင်လိုက် disc ကိုရှုး, အ set ကို type ကိုအဆုံးကြိတ်, မြန်နှုန်းမြင့်နှင့်မြင့်မားသောတိစက် .Mechanical ဗိုင်းလိပ်တံနဲ့ tools...
ISO40 Collet Chuck ကိုင်ဆောင်သူ 1, M က aterial: 20CrMnTi 2, ထုတ်လုပ်မှုစံ: DIN2080 3, ဇာစ်မြစ်၏နေရာ: တရုတ်လုပ် 4.NT40 = Taper Shanks taper 7:24; ER = အဆိုပါ er collet သတ်မှတ်ချက်များ; 100L အလုပ်၏အရှည် = ။ အဓိကအားဖြင့် collets မျိုး, tool ကိုကိုင်ဆောင်သူမျိုး, BT tool...
DIN2080 NT40 Collets Chuck ကိုင်ဆောင်သူ 1, M က aterial: 20CrMnTi 2, ထုတ်လုပ်မှုစံ: DIN2080 3, ဇာစ်မြစ်၏နေရာ: တရုတ်လုပ် 4.NT40 = Taper Shanks taper 7:24; ER = အဆိုပါ er collet သတ်မှတ်ချက်များ; 100L အလုပ်၏အရှည် = ။ အဓိကအားဖြင့် collets မျိုး, tool ကိုကိုင်ဆောင်သူမျိုး, BT tool...
တရုတ်နိုင်ငံ NT Tool ကိုရှင် DIN2080 ပေးသွင်း
တရုတ်လုပ် NT40 Tool ကိုရှင်
ရှည်လျားသောအသုံးပြုမှုကိုအချိန်နှင့်အတူ 1. အရည်အသွေးမြင့် elastic သံမဏိပစ္စည်း။
အဆိုပါ 7:24 Taper Collet Chuck ၏ 2.Shank: NT25, NT30, NT40, NT50 ။
ချိန်ခွင်လျှာ 8000rpm နှင့်အတူ 0.01mm ထက်အနည်းငယ်သာ 4.The တိ။ ပိုမိုမြင့်မားသောတိလည်းသင့်ရဲ့ဝယ်လိုအားတို့ကဖန်ဆင်းနိုင်ပါသည်။
6.The protrusion အရှည် 20mm ကနေ 300mm မှကွာခြားချက်ဖြစ်ပါတယ်။
8.Please collet Chuck သရေကျဘား၏ချည်အကြောင်းကြား။
NT စီးရီး Tool ကိုရှင်
NT40 Chuck ရှင်
NT40 Collets Chuck ရှင်
Tool ကိုရှင် Tool ကိုရှင်
စီးရီး Collets Tool ကိုရှင်